कतारको अशोभनीय आडम्बर- विचार - कान्तिपुर समाचार
मंसिर २१, २०७८ सम्पादकीय
काठमाडौँ — विश्वकप फुटबल हेर्न आउने समृद्ध दर्शकका नजरमा नपरून् भनेर आप्रवासी श्रमिकहरूलाई चार महिनाका लागि स्वदेश पठाउने कतार सरकारको निर्णय अन्यायपूर्ण छ । यसबाट फुटबल महामेला आयोजना गर्ने कतारी सपना पूरा गराउन आठ रंगशालासहित पूर्वाधार निर्माणमा रातदिन पसिना बगाएका नेपालीलगायत विभिन्न मुलुकबाट गएका श्रमिकहरूको घोर अपमान भएको छ । जसले कतारको शोभा बढाउन आफ्नो श्रमको योगदान दिए, तिनकै उपस्थितिलाई विश्वकपको शोभाविपरीत मान्ने यो मानसिकता अशोभनीय मात्र होइन, खेदजनक नै छ । आप्रवासी कामदारहरूलाई बिलकुलै फरक दर्जाको मानिसको व्यवहार गरेको यो अमानवीय निर्णयलाई कतार सरकारले सच्च्याउनु आवश्यक छ ।
यो निर्णयले खासमा कतार सरकारको अनुचित आडम्बर उजागर गरिदिएको छ । यसको कार्यान्वयन हुँदा भोलि फुटबल महामेला हेर्न आउने सम्भ्रान्त दर्शकहरूका नजरमा विपन्न मजदुरहरू तत्क्षण नपर्लान्, तर कतारको वैभव ठडिनुमा लाखौं आप्रवासी श्रमिकहरूले टेको दिएको तथ्य उनीहरूले थाहा नपाउने होइनन् । कतारका रंगशालालगायतका पूर्वाधार बनाउन सहभागी श्रमिकहरूलाई लामो बिदामा घर पठाइएको र त्यसको अन्तर्य तिनलाई फुटबलका दर्शकहरूको आँखामा नपार्नु भएको यथार्थ बुझ्दा उनीहरूमा कस्तो सन्देश प्रवाह होला ? उनीहरूले कतार सरकारको यो निर्णयलाई राम्रै मान्लान् कि ढोङको पराकाष्ठा ठान्लान् ? यसले कतारको शान अझ उज्यालो बनाउला कि धमिल्याउला ?
यी प्रश्नहरूमा कतारले विचार पुर्‍याएको देखिँदैन । उसै त, आप्रवासी श्रमिकहरूको शोषण भएको भनेर अन्तर्राष्ट्रिय जगत्बाट पर्याप्त आलोचना खेपिसकेको कतारको साख यस प्रकरणले अझ तल पुर्‍याउने निश्चित छ । त्यसैले यो निर्णयमा पुनर्विचार गर्नु कतारको आफ्नै हितमा छ ।
दुनियाँलाई थाहै छ— कतार आप्रवासीहरूले भरिएको मुलुक हो । यहाँ कतारी नागरिकको तुलनामा झन्डै ८ गुणा बढी आप्रवासीहरू बस्छन् । कतारको वर्तमान र भविष्य दुवै अधिक मात्रामा यिनै आप्रवासीहरूको हातमा निर्भर छ । यस्तो अवस्थामा कतार सरकारले यस किसिमको निर्णय गर्दा सम्बन्धित कामदारहरूको मनमा मात्र चोट पुग्दैन, विश्व समुदायमा पनि गतिलो सन्देश जाँदैन । उल्टो यसले कतारको दोहोरो चरित्र बाहिर ल्याउँछ, र पहिले भए भनिएका शोषणका आरोपहरूलाई पुष्टि गर्न बल पुर्‍याउँछ । त्यसैले सबै आप्रवासी श्रमिकहरूको सम्पूर्ण मानव अधिकारलाई सम्मान र संरक्षण गर्दै तिनको उपस्थितिप्रति हीनताबोध होइन, गर्व गर्न कतार सरकारले सक्नुपर्छ ।
फेरि, विश्वकप फुटबल त्यस्तो खेल उत्सव हो, जसलाई सबभन्दा बढी मानिसले सञ्चारमाध्यममा प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्छन् । रंगशालामा उपस्थित भएरै खेल हेर्न विश्वभरबाट हजारौं फुटबलप्रेमीहरू खेल आयोजनास्थल पुग्छन्, त्यसका निम्ति महिनौंअघिदेखि प्रबन्ध मिलाउँछन् । तर कतारको यो निर्णयले त्यही देशमा वर्षौं–महिनौंदेखि काम गर्दै आएका कामदारहरूलाई समेत यो उत्सवमा प्रत्यक्ष सहभागी हुनबाट रोकेको छ । विश्वकप–पूर्वाधार निर्माणमा संलग्न कति कामदार पनि फुटबल भनेपछि हुरुक्कै हुने गर्छन् । आफ्नै हातले बनाएको मैदानमा मेसी र रोनाल्डो खेल्न आउँदा कतार सरकारले आफूहरूलाई खेल हेर्न निषेध गर्न लागेको थाहा पाएर उनीहरू अहिले खिन्न छन् । यी श्रमिकहरूलाई थाहा छ— उनीहरूको कामको सम्मान गरेर कतार सरकारले लामो तलबी बिदा दिन लागेको होइन, उनीहरूलाई छिःछिः–दूरदूर गरेर खेलस्थलबाट बाहिर पठाउन लागेको हो । त्यसैले कामदारको योगदानको बदलामा तिरस्कार गर्ने यो रबैया कतारले त्याग्नुपर्छ ।
भौतिक रूपमा संसारकै एउटा समृद्ध राष्ट्रले त बरु कामदारको जीवनशैलीलाई सम्मुन्नत बनाउनेबारे पो सोच्नुपर्छ । उनीहरूको कार्यस्थल–सुरक्षा, बसोबासस्थल र हकहितका अरू पक्षमा आमूल सुधार गरेर विश्वसामु उदाहरणीय बन्ने बाटो पो रोज्नुपर्छ । त्यस्तो भएमा कामदार सुरक्षामा अग्रणी मुलुकको परिचय बनाएरै पनि कतार विश्वसामु थप चम्किनेछ । विश्वकप फुटबल आयोजना आँटेर कतारले आफ्नो भौतिक, आर्थिक र व्यवस्थापकीय सामर्थ्य प्रदर्शन गर्न त खोजेकै छ, कामदारहरूलाई पनि समुचित व्यवहार गरेमा श्रमिक अधिकार र मानवताका पक्षमा पनि यो देश अगाडि देखिनेछ ।
यो निर्णयबाट नेपाली कामदारलाई पनि आघात पुग्नेछ । अहिलेसम्म २० लाख नेपाली उक्त मुलुक गइसकेका छन् भने करिब चार लाख कार्यरत छन् । निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई बिदामा राख्ने तयारी भएकाले सबैभन्दा बढी प्रभावमा नेपाली नै पर्ने सम्भावना छ । कतिपय कामदार त त्यहाँ गएको धेरै समय भएको पनि छैन । कतिले जाँदा लागेको ऋण तिर्न नै बाँकी हुन सक्छ । त्यसैले यो विषयमा नेपाल सरकारले कतारसित आफ्नो सरोकार राख्नुपर्छ । नेपाली कामदारहरूको घरफिर्तीलाई सहज र स्वैच्छिक बनाउन आग्रह गर्नुपर्छ । त्यहीँ बसेर टिकट काटेर फुटबल हेर्न चाहनेले यो अवसर पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ । नेपाल मात्र होइन, यो मानवीय मामिलामा विश्व समुदायले नै चासो राख्नुपर्छ, र कतारलाई आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न लगाउनुपर्छ ।
प्रकाशित : मंसिर २१, २०७८ ०८:१९
समिरको अविजित २९९
मंसिर २१, २०७८ विनोद पाण्डे
काठमाडौँ — मूलपानीस्थित मैदानमा नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को मुख्य कार्यालय छ । राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता भएको समयमा यसै भवनको एकछेउमा अम्पायर, स्कोरर र म्याच रेफ्रीले निर्णायक भूमिका निभाइरहेका हुन्छन् । गत साता क्यान कार्यालयको बार्दलीबाट यू–१९ राष्ट्रिय प्रतियोगितामा म्याच रेफ्रीको भूमिका निभाइरहँदा समिर खान विगत सम्झेर रोमाञ्चित भइरहे ।
लुम्बिनी र वाग्मतीबीचको खेल चलिरहेको थियो । राष्ट्रियस्तरको प्रतियोगितामा खानको त्यो २ सय ५० औं खेल थियो । त्यसले उनलाई विगतको सम्झना गरायो । उनीसँग अतित फर्कनुको केही विशेष कारण थिए । भैरहवा र बुटवलबाट प्रकाशित स्थानीय पत्रिकामा उनी समिर खानको नामबाट कोलम लेख्थे । सर्वत्र त्यही नामले चिनिए उनी । तर, उनको खास नाम मोहम्मद सफिक हो ।
सन् १९९८ मा नेपालले एसीसी ट्रफी आयोजना गर्दै थियो । त्यसअगाडि क्यानले अम्पायरिङ कोर्स गरेको थियो । नेपालका प्रशिक्षक थिए अस्ट्रेलियाका ब्रायन बिगिन्स । उनै बिगिन्सले उक्त अम्पायरिङ कोर्स चलाएका थिए । क्यानले जिल्लाहरूमा अम्पायरिङ कोर्सका लागि पत्र काटेको थियो । रूपन्देही जिल्ला क्रिकेट संघमा खान सचिव थिए । पत्रपत्रिकामा लेख्ने भएर उनलाई धेरैले चिन्दथे । जानेबुझेको भनेर उनैलाई अम्पायरिङ कोर्समा पठाइयो ।
ललितपुरको स्टाफ कलेजमा चलेको थियो अम्पायरिङ कोर्स । उनी र अर्का अम्पायर सत्यजित सरकारले अंग्रेजीमा रहेको अम्पायरिङ कोर्स बुक नेपालीमा उल्था गरेर सहभागी सबैलाई दिएका थिए । अघिल्लो महिना बुटवलमा सम्पन्न क्रिकेट अम्पायर्स एसोसिएसनमा उनै खान र सरकार अध्यक्ष पदमा प्रत्याशी बनेका थिए ।
२०५४ सालमा भैरहवामा सम्पन्न जय ट्रफीदेखि खानले अम्पायरिङ थालेका थिए । झन्डै २०६५ सम्म ३६ खेलमा अनफिल्ड अम्पायरिङ गरे । तर त्यसबीचमै उनलाई कथाले म्याच रेफ्रीको भूमिका डोर्‍याइसकेको थियो । सन् २००३ मा नेपाल, भुटान र माल्दिभ्स सम्मिलित इमर्जिङ नेसन्स कप आयोजना भएको थियो । एसियाली क्रिकेट परिषद् (एसीसी) को ‘सीमित बजेट’ को उक्त प्रतियोगितामा विदेशका कोही म्याच रेफ्री थिएनन् । त्यतिखेरसम्म नेपालबाट कोही म्याच रेफ्री बनेका थिएनन् । तर, २००१ मै पाकिस्तानको इस्लामाबादमा आईसीसी र एसीसीको एडभान्स अम्पायरिङ कोर्समा खानले म्याच रेफ्री कोर्स पनि गरेका थिए । त्यही कोर्सका कारण उनले इमर्जिङ नेसन्स कपमा म्याच रेफ्रीको भूमिका पाए ।
त्यसयता उनले निरन्तर म्याच रेफ्रीको भूमिका निभाइरहेका छन् । ‘म्याच रेफ्रीको आवश्यकता बढ्दै गएपछि अम्पायरिङमा फर्किने वातावरण नै बनेन,’ उनी सुनाउँछन्, ‘तर, तलतल मेटाउन भए पनि जिल्लाका प्रतियोगिताहरूमा अम्पायरिङ गर्छु ।’
५६ वर्षे उनका लागि २००५–०६ मा हङकङसँग तीनदिवसीय खेल स्मरणीय छ । किनकि तीनदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा म्याच रेफ्री भएको त्यो उनको एकमात्र खेल थियो ।
छोराको ग्य्राजुएसनमा अस्ट्रेलिया पुग्दा उनले क्रिकेट अम्पायरिङमा नयाँ अनुभव बटुल्ने अवसर पाए । सय वर्षभन्दा पुरानो हो सिड्नी प्रिमियर लिग । यो ग्रेड क्रिकेट हो र पाँच श्रेणी हुन्छन् । तेस्रो श्रेणीको लिगमा ५ वटा दुईदिवसीय खेलमा म्याच रेफ्री गर्न पाउनु आफ्ना लागि ठूलो उपलब्धि मान्छन् उनी । क्रिकेट सिजन सुरु हुनु एक साताअघि भएको वर्कसप र परीक्षणमा आएको नतिजाअनुरुप उनलाई एकैपटक तेस्रो श्रेणीको लिगमा अम्पायरिङ गर्न दिइएको थियो ।
‘खेलाडीको अनुशासन मलाई अनौठो लाग्यो । ९० प्रतिशतभन्दा बढी आउट हुने सम्भावना भएकामा मात्र त्यहाँ खेलाडीले आउटको अपिल गर्दा रहेछन्,’ समिरले आफ्नो अनुभव सुनाए ।
राष्ट्रिय प्रतियोगितामा २ सय ५२ खेलमा म्याच रेफ्री गरेको तथ्यांक छ उनीसँग । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गरेर उनले २ सय ९९ खेलमा म्याच रेफ्रीको भूमिका निभाइसकेका छन् । निर्णायकको भूमिकामा उनको भोक धेरै देखिन्छ । त्यही भएर अझै कतिसम्म यस फिल्डमा हुन्छन् उनलाई नै थाहा छैन । कोसेढुंगाको रूपमा रहने म्याच रेफ्रीको भूमिकामा आफ्नो ३ सय खेलको व्यग्र प्रतीक्षामा उनी छन् ।
प्रकाशित : मंसिर २१, २०७८ ०८:१२